ပညာရေးသတင်း | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ပညာရေးသတင်း. Show all posts
ပညာရေးသုံး ပစ္စည်းများ ပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပ
ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ (၁) နာရီတွင် နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၁၃) ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန အစည်း အ‌ဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ကူဘိုတာ ကုမ္ပဏီ၏ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အတွက် ပညာရေး အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်း အနားသို့ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့် အမှာ စကား ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၉ ဒသမ ၅ သန်းခန့်ရှိရာ ကလေးတိုင်း ကောင်းစွာ သင်ယူနိုင် ရေး သည် အဓိက ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရန် ဆရာ၊ ဆရာများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးသည်လည်း အဓိက ကျပါကြောင်း၊
(၂)နှစ်သင် ပညာရေး ကောလိပ်မှ (၄)နှစ်သင် ပညာရေး ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနေပြီး နှစ်စဉ် ဆရာ၊ ဆရာမ မွမ်းမံ သင်တန်းကိုလည်း ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊
သင်ကြားရေးအတွက် ICT နည်းပညာများ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊
ကူဘိုတာမှ ပေးအပ် လှူဒါန်းသော ပညာရေးအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းရှိ မျက်မမြင် နားမကြား ကျောင်းများနှင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး များသို့ ဖြန့်ဝေ ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊
ယခုလို ပေးအပ်လှူဒါန်းသော ကူဘိုတာ ကုမ္ပဏီအား ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ Vice-President Sale & Service HQ, GM of SIAM Kubota Corporation Co,Ltd မှ Mr. Somboon Chintanaphol နှင့် Kubota Myanmar Co, Ltd ၏ Managing Director Mr. Toyokaza Murata တို့မှ အမှာစကား ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် ကူဘူတာကုမ္ပဏီမှ ကလေးများအတွက် လွယ်အိတ်နှင့် စာရေးကိရိယာများ လှူဒါန်းရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းနှင့် အခြေခံ ပညာရေးဦးစီး ဌာန ခေတ္တ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်နိုင်စိုးတို့က လက်ခံရယူကြ သည်။
KUBOTA Myanmar Co, Ltd. နှင့် SIAM KUBOTA Corporation Co, Ltd. တို့ ပူးပေါင်းကာ တတိယအကြိမ်မြောက် လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းနေ အရွယ် ကလေးများ အတွက် လွယ်အိတ်နှင့် စာရေး ကိရိယာများ အစုံရေ (၁၅၀၀၀) စုစုပေါင်း တန်ဖိုးငွေ သိန်း ၉၀၀ ခန့် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး (ရန်ကုန်ဇုန်) နည်းပြ သင်တန်း ဆင်းပွဲ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး ဇုန် အဆင့် (ရန်ကုန်ဇုန်) နည်းပြ သင်တန်း ဆင်းပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန် မြို့ ကမာရွတ် မြို့နယ် အမှတ် (၁) အခြေခံ ပညာ အထက် တန်းကျောင်း (ကမာရွတ်) ရှိ သိင်္ဂီမြိုင် ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် သင်တန်းတာဝန်ခံ ဆရာကြီး ဦးအောင်စိုးက ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး၊ ဇုန်အဆင့် နည်းပြသင်တန်း အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်တန်းဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အခြေ အနေများကို ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ စာတတ်မြောက်ရေး အထောက်အကူပြု ပင်မဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဆရာကြီး ဒေါက်တာတင်ညိုနှင့် ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန့်စင်တို့က သင်တန်းထူးချွန်ဆု ရှိကြသည့် သင်တန်းသား များအား ထူးချွန်ဆုများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်ကြပြီး ဆုရရှိကြသူများ ကိုယ်စား သင်တန်းသူတစ်ဦးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည် ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံ စာတတ်မြောက်ရေး အထောက်အကူပြု ပင်မဌာန ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းဦးနှင့် ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန့်စင်တို့က သင်တန်းဆင်း အမှာစကား ပြောကြားကြသည်။
အဆိုပါ နည်းပြသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ (၁၅၃)ဦး တက်ရောက်ကြပြီး သင်တန်း ကာလမှာ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့အထိ (၉) ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/06/blog-post_663.html
မြန်မာ့ပညာရေး အရည်အသွေးရော အရေအတွက်ပါ ကျဆုံးနေ ဟုဆို
မြန်မာ နိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ် ၀န်ထမ်း အောင်စာရင်း အရ မြန်မာ့ ပညာရေးမှာ အရည် အသွေးရော အရည် အချင်းပါ ကျကျရှုံး နေကြောင်း ပညာရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကွန်ရက် အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်သူသူမာက မဇ္ဈိမ၏ Dialouge အစီအစဉ်တွင် ပြောသွား ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် စာမေးပွဲအောင်ချက်မှာ ၃၀ရခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ ရှိနေခြင်းက အရေအတွက်အရ ၇၀ရာခိုင်နှုန်း ကျဆုံးနေကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။
ထို့အပြင် အလွတ်ကျက်စနစ်ဖြင့် ဖြေဆိုရခြင်း၊ ရမှတ်အပေါ် ရာနှုန်းပြည့် အခြေခံ၍ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ခြင်းများက အရည်အသွေးကျဆုံးခြင်းများဖြစ်သည်ဟု လည်းဆိုသည်။
အလွတ်ကျက်ဖြေဆိုရခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ၊ ပြသနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းများ၊ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ရွေးချယ်ခွင့်များ ကျဆုံးနေ သည်ဟု ဒေါ်သူသူမာက ပြောသည်။
“အမှတ်နဲ့ကန့်သတ်တာကိုက မှားတယ်လို့ပြောချင်တာ။ လူငယ်တွေတင်နစ်နာတာမဟုတ်ဘူး။ မိဘတွေပါ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တာ။ နိုင်ငံတော်ကလည်း ဒီ ပညာရေး အတွက် စာမေးပွဲ အတွက် ပိုက်ဆံတွေ ရှိသလို ကိုယ့်ကလေး စာမေးပွဲအောင်ဖို့ အမှတ်များများ ရဖို့ စိုက်ထုတ် လိုက်ရတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးကြီး ကလည်း ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်အောင်ဖို့ကျတော့အရမ်းခက်တယ်။ ကျမရဲ့ အမြင်ကျတော့ အောင်တဲ့သူရော ကျတဲ့သူရော ကိုယ့်အတွက်ရေရှည် မှာ တကယ်ရောအရည်အသွေးရှိတဲ့ပညာကို ရခဲ့ရဲ့လား” ဟု ပြောသွားခဲ့သည်။
ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် မြန်မာစာပါမောက္ခ စာရေးဆရာမောင်သာချိုကလည်း လူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် နောက်တစ်ဖန်ကြိုးစားခွင့်မရသည့် အမှတ်ဖြင့် တက္ကသိုလ်လိုင်းခွဲသော ပညာရေးစနစ်ကို မကြိုက်ကြောင်းနှင့် ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆရာများအဖွဲ့ချုပ်မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါက်တာ အာကာမိုးသူကလည်း မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်၏ သင်ရိုးညွှန်းတန်းများတွင် စဉ်းစား စဉ်ခြင်မှုကိုအားမပေးဘဲ သင်ရိုးညွှန်းတန်းကိုယ်၌က ကျောင်းသူကျောင်းသားကို အကျဉ်းအကျပ်ထဲရောက်အောင် တွန်းပို့မိသလိုဖြစ်နေကြောင်းပြောသည်။
ဒါ့အပြင် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ၂၀၁၇ခုနှစ် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ဇွန်လ၂၄ရက်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမတွင် စတင်ပြုလုပ်နေသော်လည်း အမှတ်စာရင်းပေါ်အခြေခံ၍ တက္ကသိုလ်လိုင်းခွဲသည့်စနစ်ကို ပထမနေ့တွင် မဆွေးနွေးဖြစ်သေးကြောင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရေးရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေလှဝင်းက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ပထမနေ့အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးဆိုင်ရာ စာတမ်း၅စောင် ဖတ်ကြားခဲ့ကြပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပညာရေးမြှင့်တင်ရေး ရေးရာကော်မတီဝင်များ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ကြီးနှင့်ဒုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆရာများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဆရာ/ဆရာမများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အမှတ်စာရင်းပေါ်အခြေခံ၍ တက္ကသိုလ်လိုင်းခွဲသည့်စနစ်ကို ပြင်ဆင်ရေးကိုမူ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေ ထွက်လာမှသာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင် မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်သို့ရောက်လာရန် ယခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲက အထောက်အပံ့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဦးရွှေလှဝင်းကပြောသည်။
ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်ချက်သည် ၃၃ဒသမ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် ပိုများလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
From : မဇ္ဈိမ မီဒီယာ by ထွန်းလင်းထက်
Originally published at - http://www.mizzimaburmese.com/article/28573
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဂုဏ်ထူးရှင် မျက်မမြင် ကျောင်းသားလေးဦး ပေါ်ထွက်
၂၀၁၇ တက္ကသိုလ် ၀င် စာမေးပွဲတွင် ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်း၊ ခ၀ဲခြံ မျက်မမြင်ကျောင်း၊ ပြင်ဦး လွင် မျက်မမြင် ကျောင်းနှင့် စစ် ကိုင်း မျက်မမြင် ကျောင်းများမှ မျက်မမြင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူ ၁၀ ဦး အောင်မြင်ပြီး ဂုဏ်ထူး ရ ကျောင်းသား လေးဦး ရှိခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးကြည့်‌ မြင်တိုင် မျက်မမြင်‌‌ ကျောင်းမှ မျက်မမြင် ကျောင်းသား၊‌ ကျောင်းသူ ရှစ်ဦး ဖြေဆိုခဲ့ရာ ငါးဦး‌ အောင်‌မြင်ပြီး နှစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် တစ်ဦး၊ တစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် နှစ်ဦး ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ခ၀ဲခြံ မျက်မမြင် ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ခုနစ်ဦး ဖြေဆိုရာ သုံးဦး အောင်မြင်ပြီး တစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် တစ်ဦး ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပြင်ဦးလွင် မျက်မမြင် ကျောင်းနှင့် စစ်ကိုင်း မျက်မမြင် ကျောင်းတို့မှလည်း နှစ်ဦးအောင် မြင်ခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၁၀ ဦး အောင်မြင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၁၀ ဦး အောင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျောင်းကတော့ ငါးဦးအောင် တယ်။ ဂုဏ်ထူးတွေလည်း ပါကြ တော့ အတော်ဝမ်းသာပါတယ်။ အရင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကလည်း သုံး ဘာသာ တစ်ဦးရဖူးတယ်’’ ဟု ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်း မှ ပညာရေးတာဝန်ခံ ဆရာစိန်ဘ ထွေးက ပြောသည်။
၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲတွင် မျက်မမြင်ကျောင်းသား ၂၄ ဦး၊ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်း သား ရှစ်ဦး၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါမသန် စွမ်းကျောင်းသား ၁၀၁ ဦး ဖြေဆို ခဲ့သည်။
မျက်မမြင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရာတွင် နှုတ်က အဖြေများ ကိုခေါ်ပေး၍ ၎င်းခေါ်သမျှကို အကူတစ်ဦးက လက်ဖြင့်လိုက်ရေး ပေးပြီး ဖြေဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။
From :7Day daily news by: ဆုဆက်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/99586
A.G.T.I ဒီပလိုမာ ပထမနှစ် ကျောင်းသားတွေ အတွက် တစ်ဦးကို ကျပ်သုံးသောင်း အစိုးရက ထောက်ပံ့မယ်
အစိုးရ စက်မှု လက်မှု သိပ္ပံ A.G.T.I (ပထမနှစ်) သင်တန်းသား တွေကို ခေါ်ယူခြင်းကို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ တွေမှာ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ အတွင်း ကြေငြာ သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာတော့ သင်တန်းတွေကို စတင် ဖွင့်လှစ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတွေကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိတဲ့ သင်တန်းသား တွေကို ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး အဖြစ် တစ်ဦးကို ကျပ်သုံးသောင်းခန့် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာမှ ချီးမြှင့် ထောက်ပံ့ပေး သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန နည်းပညာ သက်မွေး ပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနဟာ A.G.T.I ဒီပလိုမာ သုံးနှစ် သင်တန်းတွေနဲ့ G.T.H.S နှစ်နှစ် သင်တန်းတွေ ကိုသာမက ဒေသ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြု ကာလတို သက်မွေး ပညာသင်တန်းတွေ ကိုလည်း ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတာ ဖြစ် ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာနဲ့ အစိုးရ စက်မှု လက်မှု သိပ္ပံကျောင်း (A.G.T.I) ၁၉ ကျောင်း ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photos: YGN News, 7Day Daily
Originally published at - http://www.duwun.com.mm/news/local/a-g-t-i-id6817995.html
ခြောက်နှစ်ပြည့်ဖို့ သုံးလလိုတဲ့ ကလေး ပထမတန်း တက်ခွင့် ပြုမည်
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၈ – ယခု ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာ သင်နှစ်မှာ ပထမ တန်းကို တိုက်ရိုက် တက်ရောက်မယ့် ကလေးတွေ အနေနဲ့ အသက်ခြောက်နှစ် ပြည့်ဖို့ တစ်လ ကနေ သုံးလ အထိ လိုနေ သူတွေ ကိုလည်း တက်ရောက်ခွင့် ပြုမယ်လို့ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အခြေခံ ပညာ ဦးစီးဌာန နေပြည်တော်က ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
တိုက်ရိုက် တက်ရောက်မယ့် ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်မှု အနေ အထားနဲ့ ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးမှု အပေါ် မူတည်ပြီး အသက် ခြောက်နှစ်ပြည့်ဖို့ တစ်လ လိုသူ တွေကို ဇွန်လ ၁ ရက်ကနေ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ၊ နှစ်လ လိုသူတွေကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃၁ ရက်နေ့ အထိနဲ့ သုံးလ လိုသူတွေကို ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ ကနေ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ ခွဲခြား သတ်မှတ် လက်ခံ ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲသည်လိုလက်ခံပေးတဲ့အခါ အသက် ခြောက်နှစ်ပြည့်ဖို့ တစ်လလို သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ ထောက်ခံခွင့်ပြုချက်နဲ့ လက်ခံရမှာဖြစ် ပါတယ်။
နှစ်လလိုသူတွေကတော့ သက်ဆိုင် ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လက်ခံရမှာဖြစ်ပြီး အသက် ခြောက်နှစ်ပြည့်ဖို့ သုံးလလိုသူတွေကတော့ ခရိုင်ပညာ ရေးမှူးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကျောင်းတွေမှာအပ်နှံရမယ်လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ ယခု မေလ ၂၅ ရက်နေ့ကနေ ၃၁ ရက် နေ့အထိ ကျောင်းအပ်နှံရေး ရက်သတ္တပတ်အဖြစ်သတ်မှတ် ထားပြီး ကျောင်းအပ် စတင်လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ ကျောင်းတွေအားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လက်ခံမှာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေအတွက် ကျောင်းဝတ်စုံ၊ ဗလာစာအုပ်၊ ခဲတံစတဲ့ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းတွေကိုပါ အခမဲ့ပေးအပ် တာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံပညာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပညာသင်နှစ် ပထမတန်းမှာ သင်ရိုးဟောင်းနဲ့ သင်ကြားခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ယခုနှစ် ပထမတန်း သင်ရိုးသစ်နဲ့ စတင်သင်ကြား မယ့်နှစ်မှာ ပြန်လည်လက်ခံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတန်းမှာ စာသင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ မိဘတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် ရွှေ့ပြောင်းရတာကြောင့် ပညာသင်နှစ်မကုန်ခင်မှာကျောင်းပြင်ပ ရောက်ပြီး အတန်း တက် ခွင့်ရတဲ့ စာရင်းမှာမပါဝင်တဲ့ ကလေးတွေကို လည်း ပထမတန်းမှာ ထပ်ကျော့ ကလေးအဖြစ်လက်ခံဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုလည်း ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်ကစပြီး KG + 12 စနစ်ကို စတင်အကောင်အတည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်ချင်း စီမှာ အတန်း တစ်တန်းစီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေပြောင်းလဲ သင်ကြားမှာပါ။
အခုပညာသင်နှစ်မှာ တက်ရောကမယ့် ကလေးတွေအနေနဲ့ အသက် ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီးပါက KG တန်းမတက်ဘဲ ပထမတန်းကို စတင်သင်ကြားခွင့် ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် နစ်နာမှုမရှိအောင်လုပ်ဆောင် တာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ မိဘတွေ ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်လည်း KG တန်းမှာ ထားခွင့် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by မေသော်တာမောင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, May 30, 2017 No comments:
ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးအားလုံး ကျောင်းသို့ ရောက်လာစေရန် ဆရာ/မများ၊ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ စေတနာရှင် မိဘပြည်သူများ ပူးပေါင်း
ကရင် ပြည်နယ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပြည်နယ် လုံးကျွတ် ကျောင်းနေ အရွယ် ကလေး အားလုံး ကျောင်းအပ်နှံရေး နေ့ အခမ်း အနားကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်က ဘားအံမြို့ အမှတ် (၁) အခြေခံ ပညာ အထက်တန်း ကျောင်း မြသံလွင်ခန်းမ ကျင်းပသည်။
အခမ်းနားတွင် ကရင် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့၊ ပြည်နယ် လူမှုရေး ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ တင်ဝင်းကျော်၊ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လေ့လာ ဆန်းစစ် အကဲြုဖတ်ရေး အဖွဲ့ (သုတေသန) ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်နိုင်ဦး၊ ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးမြင့်တို့က အဖွင့် အမှာ စကား ပြော ကြား ကြပြီး ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းသား/သူများအတွက် စာရေးကိရိယာ၊ ကျောင်း ၀တ်စုံ၊ ထီး၊ မိုးကာ၊ ကျော်ပိုးအိတ်၊ ထောက်ပံ့ငွေများ လှူဒါန်းပေးသော ပြည်နယ် မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း၊ အမျိုးသမီး ရေးရာ အဖွဲ့နှင့် စေတနာရှင် အလှူရှင် များအား ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း လွှာများ ပြန်လည် ပေးအပ်ကာ ကျောင်းနေရန် အခက်အခဲ ရှိသော မူလတန်း အဆင့် ကျောင်းသား / သူများ (၅၀) ဦးအား ပညာသင် ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများ ပေးအပ် လှူဒါန်းသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အနေဖြင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးကာလမတိုင်မီ ကြိုတင်လုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် ကျောင်းနေ အရွယ် ကလေးများ စာရင်းကို ရရှိရန် ဧပြီလမှ စတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် / ကျေးရွာ အသီးသီးတွင် စာရင်းများ ကောက်ခံ ရယူပြီး ကျောင်းအပ် နှံရေးနေ့ ကာလတွင် ကလေးတိုင်း ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိ လာခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်လျက် ရှိကြောင်း၊ ကျောင်းအပ်နှံရေး ကာလ ပြီး၍ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့ အထိကို ကျောင်းသား / သူစာရင်းအား ကြည့်၍ ကျောင်းအလိုက် မြို့နယ် အလိုက် စာရင်းချုပ်၍ ကျန်ရှိနေသော ကလေးများအား သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းမှ ဆရာ/မများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများ၊ စေတနာရှင် မိဘပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကလေးများ ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိ လာရေး ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ် ပညာရေးမှူး ဦးစိုးမြင့်က အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် မူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသား/သူများအား ကျောင်းသုံးပြဌာန်း စာအုပ်အပြည့်အစုံ၊ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ် (၆)အုပ်နှင့် ကျောင်း ၀တ်စုံ(၁)စုံတို့ကို အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးပြီး အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း အဆင့်တွင်ကျောင်းသုံး ပြဌာန်းစာအုပ်တစ်စုံ(အခမဲ့) ကျောင်းလခ၊ မိဘဆရာ အသင်းကြေး၊ အားကစားကြေး၊ စာရေး ကိရိယာနှင့် စာကြည့်တိုက်ကြေးကင်းလွှတ်ခွင့်နှင့် သူငယ်တန်း(KG)အတွက် ကျောင်းဝတ်စုံ(၁)စုံတို့ကို (အခမဲ့) ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားမည့် အမေရိကန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၅ ဦး ထပ်မံ ရောက်ရှိ
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးမည့် အမေရိကန် စေတနာ့ ၀န်ထမ်း ၁၅ ဦး (ဓာတ်ပုံ − Peace Corps Myanmar)
ရန်ကုန်နှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အခြေခံ ပညာကျောင်း များတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား သင်ကြား ပေးရန် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း အဖွဲ့ (Peace Corps) ၏ ဒုတိယ အသုတ် အဖွဲ့ဝင်များ မေလ ၂၆ ရက်၌ စတင် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဟု အမေရိကန် သံရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
Peace Corps ဒုတိယအ သုတ်တွင် စေတနာ့ ၀န်ထမ်း ၁၅ ဦး ပါဝင်၍ ယင်းတို့သည် အခြေခံ ပညာကျောင်းများရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာ သာပြ မြန်မာဆရာ၊ ဆရာမများ နှင့်အတူ ၂ နှစ်ကြာ တာဝန် ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် တာဝန်မထမ်းဆောင်မှီ အတွင်း သီတင်းပတ် ၁၀ ပတ်ကြာ ကြိုတင်၍ မြန်မာ ဘာသာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သင်ကြားရေး စွမ်းရည်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေး ကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြိုသင် တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Peace Corps ဖွဲ့ ပထမအသုတ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငါးဦးသည် ၂၀၁၆ က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးရှိ အခြေခံ ပညာ အလယ်တန်း ကျောင်းများနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား သင်ကြားပေး ခဲ့ပြီး ယခု အကြိမ်တွင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် တိုးချဲ့သင်ကြားမည် ဖြစ်သည်။
From :7Day daily news By : ဆုဆက်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/97256
ကျောင်းအပ်နှံရေး သီတင်းပတ်အဖြစ် မေလ ၂၅ ရက် ကနေ ၃၁ ရက်အထိ သတ်မှတ်
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အတွက် ကျောင်းအပ်နှံရေး သီတင်းပတ် အဖြစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့ ကနေ ၃၁ ရက်နေ့ အထိကို ပညာရေး ၀န်ကြီး ဌာနက သတ်မှတ် လိုက်ပါတယ်။
“ကျောင်းနေ အရွယ် ကလေးတိုင်း ကျောင်းအပ်နှံရေးနှင့် ကျောင်းထွက်သူ ပပျောက်ရေး ပြည်သူ အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေး” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ပညာရေး ၀န်ကြီး ဌာနက နှိုးဆော် ထားတာပါ။
လက်ရှိ အခြေ အနေမှာ ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ပညာရေးမှာ ကျောင်းပေါင်း ၄ သောင်းကျော် ဖွင့်လှစ် ထားနိုင်ပြီး ကျောင်းသားပေါင်း ၁၀ သန်း နီးပါးကို ဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း ၃ သိန်း နီးပါးက ပညာသင်ကြား ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ- LAW (EPA)
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/36626/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 24, 2017 No comments:
လူသားရင်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ
ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ လူသား အရင်း အမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့ နံနက် ပိုင်းက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ကုန်သည် များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အခမ်း အနားတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ လူသား အရင်း အမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးသည် အလွန် အရေး ကြီးကြောင်း၊
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာ အားကောင်းရေး၊ ဒေသတွင်း လုပ်ငန်း များတွင် လိုအပ်လျက် ရှိသည့် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု အတတ် ပညာနှင့် ဝေဖန် ပိုင်းခြား တွေးခေါ်နိုင်သော စွမ်းရည်၊ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် ခွဲခြား ဆန်းစစ် လေ့လာ နိုင်သော စွမ်းရည် စသည့် လိုအပ် ချက်များ ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ရေး၊ ဒေသမှ တောင်းဆိုမှု အများဆုံး ဖြစ်သည့် သင်တန်း အမျိုးအစား တစ်မျိုး စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်း များကို ရေရှည် တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးသည် ယနေ့ ကျင်းပသည့် နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအား အထူးတန်ဖိုးထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးအောင်မြင်မှသာ လူငယ်များ၊ ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်နှင့် လစာကောင်းကောင်းရရှိနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အထောက် အကူ ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း၊
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သာမက ဖွံ့ဖြိုး မှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စိတ်ပါဝင်စားသောနယ်ပယ်များတွင်လည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်၍ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်း ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ သက်မွေးပညာ သင်တန်း ကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့် ဆရာဆရာမများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်နှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ကုန်သည် များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ကြသည်။
ပထမတန်း မပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို ပထမတန်းမှာ ပြန်သင်ခွင့် ပြုမည်
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၇ – ပြီးခဲ့တဲ့ ပညာသင်နှစ် ပထမတန်းမှာ သင်ရိုးဟောင်းနဲ့ သင်ကြား ခဲ့ပြီး အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်း ဆက်မတက် ဖြစ်တဲ့ သူတွေကို အခုနှစ် ပထမတန်း သင်ရိုးသစ်နဲ့ စတင် သင်ကြားမယ့် နှစ်မှာ ပြန်လည် လက်ခံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတန်းမှာထပ်ကျော့ ကလေးအဖြစ် လက်ခံဖို့သက်ဆိုင်ရာ အခြေခံပညာကျောင်းတွေကို ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
တချို့ ဝန်ထမ်းသားသမီးတွေရှိတယ်၊ ကျန်းမာရေးအရကျောင်း တက်ရတဲ့ ကလေးတွေရှိမယ်၊ အဲဒီလို ပထမတန်းကိုနေဖူးပြီး ပညာ သင်နှစ်မကုန်ခင် ကျောင်းဆက်မတက်ရတဲ့ ကလေးတွေကို ပြန်လက်ခံမှာပါ၊ ပြီးတော့ အဓိကကတော့ ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးအောင်ပေါ့၊
ဒီနှစ်ကသင် ရိုးသစ်နဲ့ သင်မယ်ဆိုပေမဲ့ ကလေးတွေအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲကြီး မဟုတ်ပါဘူးလို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးအဆင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင် နှစ်ကစပြီး KG +12 စနစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်ချင်းစီမှာအတန်းတစ်တန်းစီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ ပြောင်းလဲ သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ပညာသင်နှစ်မှာတက်ရောက်မယ့် ကလေးတွေအနေနဲ့အသက် ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီးပါက KG တန်းမတက်ဘဲ ပထမတန်းကိုစတင် သင်ကြားခွင့်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 20, 2017 No comments:
ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲယူတဲ့ ကျောင်း သားတွေ နည်းတာ ပြန်လည် ဆန်းစစ်သွားမည်
အခြေခံ ပညာ အထက်တန်း ကျောင်းတွေမှာ ဝိဇ္ဇာ ဘာသာတွဲ သင်ယူတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ နည်းတဲ့ အတွက် ဘာကြောင့် နည်းတာလဲ ဆိုတာကို အခု လာမယ့် ကျောင်းအပ် ရာသီမှာ ပြန်လည် ဆန်းစစ် သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။
သင်္ဃကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်က ဦးရွှေလှ မေးမြန်းတဲ့ အခြေခံ ပညာ အထက်တန်းမှာ ဝိဇ္ဇာဘာသာ ဖြစ်တဲ့ သမိုင်းနဲ့ ပထဝီ ဘာသာ ရပ်တွေကို သင်ယူတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ နည်းပါး လာတဲ့ အတွက် ပညာရေး ဟန်ချက်မ ညီ ဖြစ်ပေါ် နေခြင်းကို ဘယ်လို ဆောင်ရွက် မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာရေး ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုး သိမ်းကြီးက အခုလို ပြန်လည်ဖြေဆို သွားတာပါ။
ရွိုင်ရယ် ဟောလိုးဝေး တက္ကသိုလ်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ် လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်၊ မေ ၉ – စင်ကာပူ နိုင်ငံ ကက်ပလန် ကျောင်းရဲ့ တွဲဖက် တက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့ Royal Holloway University ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာ ရပ်တွေကို တက်ရောက် နိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ စီးပွားရးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Management, Management With Accounting, Manag-ement With International Business, Management With Marketing စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့ဒီဂရီကို မြန်မာကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ကက်ပလန်မှာ ၁၈ လ တက်ရောက်ပြီး ယူကေရှိ Royal Holl-oway University ကနေပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Royal Holl-oway University ရဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့် အနေနဲ့ CAT ရရှိထားသူတွေ၊ ABE Business Diploma ရရှိထားသူတွေနဲ့ Business ကို ဆက် နွှယ်တဲ့ ဒီပလိုမာကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ လျှောက်ထားနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ HND, NCC ပြီးထားတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေလည်း ဘွဲ့ဒီဂရီတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘွဲ့ဒီဂရီတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်မရရှိပါက ကက်ပလန်ရဲ့ ဂလိုဘယ်ဒီပလိုမာကို အရင်တက် ရောက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေနဲ့ IGCSE ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူတွေအနေနဲ့ ဒီပလိုမာ တန်းတွေကစပြီး စတင်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ IELTS 5.5 ရှိရန်လိုအပ်ပြီး IE-LTS မရှိသေးသူတွေအနေနဲ့ En-glish Placemennt Test ကို STUDY ABROAD Informa-tion Centre မှာ အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Royal Holloway Univer-sity က ယူကေတက္ကသိုလ်အဆင့်(၁၂) နဲ့ ရပ်တည်နေပြီး AMBA, ABS, ACU အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အသိအမှတ် ပြုလက်မှတ်တွေရှိထားတဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့ Higher Education Institutions တွေရဲ့ Top 10 စာရင်းဝင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။
ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သိလိုပါကSTUDY ABR-OAD – ဖုန်း ဝ၉ ၅၁၅၁၀ဝ၈ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆစ်ဒနီ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ထူးချွန်ဆုကို မြန်မာ ကျောင်းသား တစ်ဦး ရရှိ
သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ဆစ်ဒနီ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (UTS:INSEARCH ) ရဲ့စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ထူးချွန်ဆုကို မြန်မာ ကျောင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မောင်ခွန် မင်းအောင်က ရရှိခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆုကို ပထမနှစ် စီးပွားရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းမှာ GPA အမှတ် အများဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ အတွက် ပေးအပ် ခဲ့တာဖြစ် တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
“ကျွန်တော် တကယ့်ကို ဝမ်းသာ ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နောင်အနာဂတ်မှာ (UTS:INSEARCH ) ကနေ ပညာ သင်ယူကောင်း သင်ယူ ကြမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် စံပြတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် သူတို့လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်”လို့ မောင်ခွန်မင်းအောင်က ပြောထားကြောင်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်တစ်စောင်မှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း UTS:INSEARCH က ပညာရေးထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ ၂၁၀ ,၀၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိဆုတွေကို ချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီကျောင်းမှာ ပညာသင်ယူနေတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကတစ်ဆင့် အသိပညာ တိုးပွားလာမှာသာမကဘဲ တက္ကသိုလ်နဲ့ အနာဂတ်သက်မွေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါ ထူးချွန်ဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုတွေကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်“ လို့ UTS:INSEARCH ပညာရေးဌာနမှူး Tim Laurence က ပြောကြားထားပါတယ်။
မောင်ခွန်မင်းအောင်အနေနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ဆစ်ဒနီနည်းပညာတက္ကသိုလ် (UTS:INSERCH) သို့ စီးပွားရေးပညာရပ် သင်ယူဖို့နဲ့ ဒီဂရီဘွဲ့ ပညာရေး အစီအစဉ် တက်ရောက်ဖို့ ရွေးချယ်မှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပညာရေး ကိုယ်စားလှယ်ရုံး AVSS မှ ကူညီပေး ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, ပညာရေးသတင်း, မြန်မာရေးရာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ စီးတီးကောလိပ်ရဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေ လျှောက်နိုင်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၆ – အမေရိကန် နိုင်ငံ နယူးယောက် မြို့မှာရှိတဲ့ The City College of New York (CCNY) ရဲ့ ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ ဘာသာ ရပ်တွေ၊ အင်ဂျင် နီယာ ဘာသာရပ်တွေ၊ ဗိသုကာ ဘာသာရပ်တွေ အပြင် ပညာရေးနဲ့ အသက် မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူတွေ အတွက်ဘာသာရပ် မျိူးစုံကို လျှောက် ထားနိုင် ပါတယ်။
ဆေးသိပံဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကို အဓိက သင်ကြားပေးတာ ဖြစ်ပြီး နိုဘယ်ဆုရှင်ကိုးဦးကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီး CCNY ရဲ့ College of Liberal Arts and Science ကျောင်းမှာ Biochemistry, Biotechnology, Earth and Atmospheric , Environment and Earth System Science , Biology, Chemistry, Mathematics အပါအဝင် Physics စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Architecture ဆိုင်ရာ ဘာ သာရပ်ကို တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ CCNY ရဲ့ Bernard and Anne Spitzer School of Architecture ကျောင်းမှာ တက် ရောက်နိုင်ပြီး အဲသည်ကျောင်းက နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့် သက်တမ်းရှိပြီး နယူးယောက် မြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်း သော ပြည်သူပိုင် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းစရိတ်အနေနဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတက်ရောက်သူတွေအတွက် တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀ဝ ခန့် ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လွန် ဒီဂရီတက်ရောက်မယ့်သူတွေအတွက် ဘာသာရပ်နဲ့ credit ပေါ်မှာ မူတည်ကာ တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်သိန်း ၂၀ဝ ကနေ ကျပ်သိန်း ၄၀ဝ အတွင်း ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အနီးဆုံး ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကတော့ ဩဂုတ်လ ဖြစ်ပါတယ်။
The City College of New York ကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက international.ccny.cuny.edu မှာ ဝင် ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သလို AT& S နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်း ဖုန်း နံပါတ် ဝ၉ ၅၀၆၂၁၇၁၊ ဝ၉ ၇၇၇ ၂၂၃၂၂၅ ကိုလည်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 29, 2017 No comments:
ဒီဇိုင်းဘာသာရပ် ကျွမ်းကျင်သင်တန်း လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၅ – ဒီဇိုင်း ဘာသာ ရပ်ကို စိတ်ဝင်စား သူတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒီဇိုင်း ပညာရှင် (Professional Multi Designer) အဖြစ် ရပ်တည် လိုသူတွေ အနေနဲ့ ဒီဇိုင်း သင်တန်းတွေ တက်ရောက် နိုင်တယ်လို့ သိ ရပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်နာ တစ်ဦး အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Drawing, Painting, Photo Editing, Sound Editing, Adjustment and Virtual Effect စတဲ့ အ ကြောင်း အရာတွေကို လက်တွေ့ ရေးဆွဲ အသုံးပြုကြ ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အဲသည် သင်တန်းမှာ Vector Graphic နဲ့ Logo Design တွေ ဖန်တီးရေးဆွဲခြင်းအတွက် Adobe Illustrator , အရည်အသွေးမြင့် Computer Graphic(CG) တွေဖန်တီးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံပြုပြင် ခြင်း၊ ဗီနိုင်း၊ ဘေလ်ဘုတ်၊ ပိုစတာ တွေ ဖန်တီးရေးဆွဲတာအတွက် Adobe Photoshop, သုံးဖက်မြင် ရှုခင်းတွေ၊ ရုပ်ပုံတွေ ဖန်တီးရေးဆွဲတာ တွေအတွက် Bryce ၊ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်(Animation) တွေ၊ ဂိမ်းတွေ ဖန်တီးရေးဆွဲတာတွေ အတွက် Adobe Flash , အသံပိုင်း ဆိုင်ရာ တည်းဖြတ်မှုတွေ အတွက် Sony ACID , ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း Layout Design တည်ဆောက်မှုတွေအတွက် Adobe In Design, Electronic Publishing, လုပ်ငန်းတွေအတွက် Adobe Acrobat တို့ကို လည်း ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးမှာပါ။
သင်တန်းချိန်တွေက (တနင်္လာ+ဗုဒ္ဓဟူး+သောကြာ) ရက်တွေမှာ မနက် ၉း၁၅ နာရီကနေ ၁၂း၄၅နာရီအထိ ဖြစ်ပြီး သုံးလခန့် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Myanmar World Wide Web Institute(M3WI) ဖုန်း နံပါတ် ဝ၉ ၅၂၁၁၂၅၊ ၆၅၂၂၈၈၊ ဝ၉ ၉၇၂၅၁၄၁၀၃ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှစ်တန်းအောင်သူတွေ အာဆီယံ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၀ – အဌမတန်း (Grade-9) အောင်မြင်ပြီး သူတွေ အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် အတွက် အာဆီယံ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထား နိုင်ပြီလို့ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက် အရ သိရပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် အတွက် စင်ကာပူ အစိုးရ ကျောင်းတွေ Secondary Three မှ Pre-University Two Level အဆင့်ထိ လေးနှစ်တာ ပညာ သင်ကြားခွင့် ရရှိမယ့် အာဆီယံ ပညာ သင်ဆုကို ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသပြည်နယ်အသီးသီးရှိ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတွေမှ အနိမ့်ဆုံး အဌမတန်း (Grade-9) အောင်မြင်ပြီးသူတွေဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း များ(ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့ သင်တဲ့ကျောင်းများ)မှ အဌမတန်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေလည်း လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာဆီယံ ပညာသင်ဆု ပဏာမရေးဖြေစာမေးပွဲကို မေလ ၁၁ ရက်မှာ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေက သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နေရာမှာသင်္ချာ၊ အင်္ဂလိပ် နဲ့ သိပ္ဗံဘာသာရပ်တွေကိုဖြေဆိုရမှာဖြစ် တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖြေဆိုချိန်ကတော့ တစ်ဘာသာကို မိနစ် ၃၀ ဖြစ်ပြီး နံနက် ၁၀းဝ၀ နာရီ စတင်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်။
ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်တဲ့ သူတွေကတော့ အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာနဝင်း၊ အဆောင် ၃၊ သထုံလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပညာရေးသုတေသန စီမံကိန်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန (သင်ရိုးဌာနခွဲ)မှာ အာဆီယံ ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာပုံစံတွေထပ်မံ ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပဏာမရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးတဲ့သူတွေဟာ စင်ကာပူ နိုင်ငံမှလာရောက်စစ်ဆေးမယ့် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ရန်ကုန် မြို့မှာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ထပ်မံရွေးချယ်ခံရသူတွေကတော့ စက်တင် ဘာလထဲမှာ လူတွေ့စစ်ဆေးတာကို ထပ်မံဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အာဆီယံပညာသင်ဆု အစီအစဉ်မှာ ဆိုရင် စင်ကာပူအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထူးချွန်ကျောင်းသူကျောင်း သားတွေကို အာဆီယံ ပညာသင်ဆုရွေးချယ်ပေးအပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by မာရီခိုင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 22, 2017 No comments:
ရက်ဖဲလ်ဘန်ကောက် ကျောင်းခွဲရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂- ရက်ဖဲလ် (Raffles International College) ရဲ့ ဘန်ကောက် ကျောင်းခွဲမှာ ဒီဇိုင်း ဘာသာရပ် တက် ရောက် သူတွေ အတွက် ၅၀ ရာခိုင် နှုန်း ပညာ သင်ဆု ပေးအပ် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပညာသင်ဆုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက်ပေးအပ်တာဖြစ်ပြီး ပညာသင်ဆု လျှောက် ထားလိုတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၈ ရက်မတိုင် ခင် လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
တက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်တွေကတော့ Fashion Design,Interior Design , Interactive Media Design , Graphic Design နဲ့ Product Design စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံ ပညာအထက်တန်း အောင် မြင်ပြီး IELTS 5.0 ရှိသူတွေ၊ GCE ‘O ‘ Level မှာ Grade C နဲ့ အထက်ရှိသူတွေ၊ International High School တွေက အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူတွေနဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီ ရရှိထားပြီး ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်နဲ့ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ရက်ဖဲလ်ကနေ ပေးအပ်မယ့် Advanced Diploma ကို နှစ်နှစ် တက်ရောက် ပြီးပါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Northumbria University Newcastle ကနေ ပေးအပ်မယ့် ဒီဇိုင်းဘွဲ့ဒီဂရီကို တစ်နှစ်ကနေ တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း ရက်ဖဲလ်ဘန်ကောက် မှာ တက်ရောက် ရယူနိုင်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားလိုသူ တွေ Raffles International College Bangkok မှာ တက်ရောက်လိုသူတွေ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက AT &S (နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုကုမဏီ)ဖုန်း -ဝ၉ ၅၀၆၂၁၇၁၊ ဝ၉ ၇၇၇ ၂၂၃၂၂၉ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, April 05, 2017 No comments:
စင်ကာပူနိုင်ငံ တီအမ်စီ အကယ်ဒမီရဲ့ ဒီပလိုမာ လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂-
စင်ကာပူ နိုင်ငံ တီအမ်စီ အ ကယ်ဒမီ (TMC Academy )ရဲ့ အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာ တန်းတွေ အတွက် လျှောက်ထား နိုင်တယ်လို့ သိ ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ က ၁၀ တန်း အောင်မြင် ထားတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ၊ IGCSE အောင်မြင် ထားပြီး သူတွေ အနေနဲ့ တီအမ်စီ အကယ်ဒမီမှာ Higher Diploma ကို Part -1 ရှစ်လ၊ Part -2 ရှစ်လ၊ စုစုပေါင်း ၁၆ လ တက်ရောက် ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဘာသာရပ်တွေ အနေနဲ့ Business, Hospitality & Tourism, Mass Co-mmunication, Information Technology, Psychology စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကိုလည်း ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Higher Diploma ပြီးတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ University of Northampton, University of Greenwich, Business & Hotel Management School (B.E.H.S), Liverpool John Moores University, Monash University တွေကနေ ချီးမြှင့်တဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tourism & Hospitality နဲ့ Mass- Communication ဘာသာရပ်ကို အထူး စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တွေအနေနဲ့ TMC Academy Higher Diploma တက်ရောက်ပြီး Liverpool John Moores University,ကနေ BA (Hons) Tourism, Hospitality and Leisure, BA(Hons) Mass Communications ဘွဲ့တွေကို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တွေ၊တက္ကသိုလ်တစ်ခု ခုက ဘွဲ့ရရှိထားတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ၊ ABE အောင်မြင် ထားတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ LCCI Level(3) အောင်မြင် ထားတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ TMC Academy မှာ ဘာသာရပ် ကင်းလွတ်ခွင့်တွေ လျှောက်ထားနိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက် အနေနဲ့ IELTS 5.5 ရရှိထားဖို့လိုပါတယ်။
ကျောင်းဝင်ခွင့် ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားမှု ဆိုင် ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို အသေးစိတ် သိရှိ လိုပါက studyabroad.admin@gmail. com ကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နန်ယန်းအင်စတီကျူ့ ဟိုတယ်ရဲ့ ခရီးသွား ဘာသာရပ် လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၉ – စင်ကာပူနိုင်ငံ Nanyang Institute of Management (NIM) ရဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီး သွားလာရေး ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် ဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ့ဒီဂရီနဲ့ မာစတာ ဒီဂရီ တွေ အတွက် လျှောက်ထား နိုင်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
NIM ရဲ့ Tourism မှာ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွေတင်မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်ျးတွ ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေ စတင် လုပ်ဆောင် ရာမှာ အသုံးပြုရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကိုလည်း သင် ကြားပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
စာတွေ့ ခြောက်လနဲ့ လက်တွေ့ခြောက်လသင်ကြားရမှာဖြစ် ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမဏီတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရယူနိုင်ပါတယ်။
ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီအဖြစ် Post-graduate Diploma in Tourism & Hospitality Management ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည် ဘာသာရပ်တွေက ပညာသင်ကာလအတွင်း အလုပ်သင်လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းကို ပါ တွဲဖက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းအောင် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ IGCSE ဖြေဆိုအောင် မြင်ထားသူတွေ လျှောက် ထားနိုင် ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ IELTS 5.5 ရှိဖို့ လိုအပ်ပြီး IELTS မရှိ သေး သူ တွေအနေနဲ့လည်း English Placement Test ကို STUDY ABROAD Information Centre ကနေတစ်ဆင့် ဖြေဆိုနိုင်ပါ တယ်။
NIM ကို ကျောင်းလျှောက်ထားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Regent Consultancy Services နဲ့ STU- DY ABROAD Information Centre တို့ ပူးပေါင်းပြီး မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ (စနေနေ့) မန္တလေးမြို့၊ Swan Hotel မှာ မနက် ၁၀းဝ၀ နာရီကနေ နေ့လယ် ၁းဝ၀ နာရီအ ထိနဲ့ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel တို့မှာ နေ့လယ် ၂းဝ၀ ကနေ ညနေ ၅းဝ၀ အထိ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက STUDY ABROAD ပညာရေးဆိုင်ရာဝန် ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ဖုန်းနံပါတ် ဝ၉ ၅၁၅၁၀ဝ၈၂ နဲ့ ဝ၉ ၇၃၂၄၂၄၀၄ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 01, 2017 No comments: